စံပယ်ဖြူ ပညာပေးအစီအစဥ် / White Jasmine Program – KuMel
စံပယ်ဖြူ ပညာပေးအစီအစဥ် / White Jasmine Program
၁၊၊ အဖွဲ့အစည်းအမည် – စံပယ်ဖြူ ပညာပေးအစီအစဥ်
၂၊၊ အလုပ်တည်နေရာ – ရန်ကုန်မြို့အနီးတဝိုက်ရှိ ဘ.က စာသင်ကျောင်း။
၃၊၊ ရည်ရွယ်ချက် – ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးများအား န်ကန်သောကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဝေရန်။
၄၊၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ – အပျိုဖော်ဝင်စကျောင်းနေအရွယ် မိန်းကလေး၊ ယောင်္ကျားလေးများကို ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း။ စံပယ်ဖြူမှပို့ချသောသင်တန်းများကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(၃) ကြိမ်တိတိ ဘ.က စာသင်ကျောင်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၅၊၊ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ – အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး ဖြန့်ဝေလိုစိတ်ရှိရမည်။ အသက် (၁၈)နှစ်နှင့် (၃၅)နှစ် ကြားဖြစ်ပြီး စကားပြောကောင်းသူ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင် မိမိကိုယ်တိုင်နည်းလမ်းများ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၆၊၊ လုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ကြာမြင့်ချိန် – သင်တန်း (၄)ရက်၊ မွမ်းမံသင်တန်း (၁)ရက် စုစုပေါင်း (၅)ရက်။
ဘ.က စာသင်ကျောင်းသို့ (၃)ကြိမ် သွားရောက်ရန်။
၇၊၊ လုပ်ငန်းစမည့် နေ့ရက် ၊ အချိန် – သင်တန်းချိန် မနက် (၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ။
(စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များသာ) ဘ.က စာသင်ကျောင်းသို့သွားချိန် မနက်(၇)နာရီမှ ညနေ(၃)နာရီထိ။
မှတ်ချက်။ Covid-19 ကြောင့်လုပ်ငန်းများ ခဏရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ယခုပို့စ်တင်သည့်ရက်မှစ၍ စိတ်ပါဝင်စားသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သောFormများဖြည့်၍ပေးပို့ထားပြီး လုပ်ငန်းစမည့်အချိန် တွင် ဆက်သွယ်ခေါ်ယူပါမည်။
၈၊၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရေအတွက် – (၃၀) ဦး
၉၊၊ လေ့ကျင့်ရေး – စံပယ်ဖြူရဲ့ဆရာဝန်trainer များမှဆယ်ကျော်သက်နှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးအသိပညာများ သင်ကြားပို့ချပေးပါမည်။ ထိုသင်တန်းသို့ မပျက်မကွက်တက်ရောက်မှသာ မိမိသည် ကလေးများသို့ ကျန်းမာရေးအသိပညာပြန်လည်မျှဝေနိုင်သူဖြစ်ပါမည်။
၁၀၊၊ ဆက်သွယ်ရန် – KuMel Volunteer Connection, 09 420 738 934
White Jasmine Program
Ba Ka Monasteries near Yangon surrounding
To share proper health knowledge to teenagers.
Must be able to attend the training provided by White Jasmin Program
Must be able to participate actively3times to share knowledge at Ba Ka monasteries
Must be passed matriculation examination (High school graduated)
Must haveastrong desire to share proper health knowledge to teenagers.
Age between 18 to 35 and good speaker, able to make own decision and have own ways to share
knowledge and discuss
4 days training, 1-day upgrading training, and have to go to Ba Ka monasteries3days.
7. Start date and time
For the training – Only Saturday & Sunday, from 09:00 AM to 5:00 PM
For sharing knowledge – Only Saturday & Sunday, from 07:00 AM to 3:00 PM
The teachers from White Jasmine will teach you about health knowledge to share to teenagers. Need to attend the training without fail.
Job Category Education & Literacy